Iqiniso Mayelana Nesiqhwaga SaseMelika - Izinhlobo
Unolaka? Ulaka? CABANGA FUTHI. I- I-American Bully inja ayilutho ngaphandle kokukhalaza.
Kukhiqizelwe ngokukhethekile i- ubungane , le nja izohlala eceleni kwakho kuze kuhlukaniswe ukufa.
Ngohlobo lweBully, izinkolelo-ze ezinolaka nokucwaswa kuvamile.
Ngilapha ukuzokutshela konke odinga ukukwazi nge-American Bully, ngakho-ke uyazi iqiniso ngale nja enothando ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthi ingabe iluhlobo olufanele yini.
Yini i-American Bully?
Uzalwe waba ngumngane wakho omkhulu
Ukuqeqesha i-American Bully
Amaqiniso Ezempilo Okuhlukumeza aseMelika
Ukuthola i-American Bully Breeder Engcono Kakhulu
Izinhlobo Zezinja Ezifana Neziqhwaga ZaseMelika
Isiphetho: Ingabe i-American Bully the Breed for You?
I-American Bully yokuqala yazalelwa ku- I-united states phakathi kuka-1980 no-1990.
Umbono oyiphutha ovamile ukuthi uyefana ne-Pit Bull. Lokhu AKULONA IQINISO . I-American Bully inazo izakhi zofuzo ze-Pit Bull kukhodi yayo yasekuqaleni yofuzo, kepha ezinye izinhlobo zeBull Dog nazo zahlanganiswa, okunika i-American Bully umehluko wayo.
Kuyinto push zofuzo kude Pit Bull kwaba akukho ngozi, noma. Abalimi abathandekayo bafuna inja nge ukwakha kwezemidlalo futhi a idrayivu yokulwa ephansi. Lezi zimfanelo yingakho nje i-American Bully ikhula ngokushesha njengenye yezinhlobo ezithandwa kakhulu namuhla.
I-American Bully yamukelwa ngokusemthethweni yi I-American Bully Kennel Club ngo-2004, lapho inzalo yabhalwa khona futhi izinga lokuzala lavikelwa. Kwabonakala yi I-United Kennel Club ngo-2013.
Ungaqhathanisa iPit Bull ne-American Bully kule vidiyo:
I-American Bully inezici ezithandwayo zeBully, njenge ubanzi ngaphambili, amathambo asindayo, ikhanda eli-squarish nge imihlathi emikhulu futhi imilenze emifushane, enemisipha. Umsila mude futhi awukaze ufikelwe.
Lolu hlobo lungena 4 osayizi . Nakhu okudingeka ukwazi.
Okujwayelekile: Lokhu yi 20 ku- (51 cm) inja emaphakathi enomzimba wemisipha nekhanda lokuvimba.
Iphakethe: Le nja ifinyelela Amasentimitha angu-17 (43 cm) futhi, njengoba ungaqagela, yinja encane.
XL: Umfana omkhulu, lolu hlobo lufinyelela ubude be- Amasentimitha angama-20 (51 cm).
Okwakudala: Le American Bully yabelana ngezilinganiso ezifanayo nezilinganiso, kepha okukuhlukanisa nezinye izinhlobo ezi-3 ukwakhiwa kwayo. Umzimba wakudala awunamandla amakhulu, unemilenze emide nohlaka oluncane. I-classic kuthiwa sifane ne-Pit Bull ngaphezu kwezinye izinhlobo.
Uma kukhulunywa ngesisindo seMelika Bully, kuyehluka ngobude obulodwa. Eqinisweni, bonke abahlukumezi baseMelika babhekwa njengosayizi ojwayelekile kuze kube unyaka owodwa ubudala. Lesi silinganiso sohlobo lohlobo singasukela 66 to88 lb (30-40 kg).
Ngenxa yesilinganiso sayo esiphakeme sokuphakama / isisindo, i-American Bully yenza ukulingana okuhle kwe- noma isiphi isimo sasekhaya , noma ngabe kuyifulethi edolobheni noma yindlu enegceke. Vele ukhethe usayizi ofanele wena.
I-Micro & XXL
Uma ubona izinhlobo ze- 'Pocket Bully', 'Micro' noma 'XXL' ezikhangiswa ngabafuyi, yazi ukuthi lawa magama ayaziwa yi-ABKC.
Uma uthola i-American Bully encane futhi ucabangela imibukiso yezinja njengomsebenzi, khumbula ukuthi izinja ezincane kakhulu zivame ukwenzeka ujezisiwe noma angafaneleki ngokungalingani nezidingo zokuphakama ezilindelekile.
Isondlo Esisezingeni Elincane laseMelika
Esinye sezici ezinhle kakhulu zalolu hlobo ukuthi ukunakekelwa kuphansi kangakanani. Imidlalo yase-American Bully a ijazi elifushane, elibushelelezi lokho kungangena noma iyiphi iphethini yombala.
Yize kunjalo HHAYI hypoallergenic , ijazi lelo ukuchitheka okuphansi. Uzodinga ukuxubha i-Bully yakho kuphela kanye ngeviki. Akudingeki mkhwenyana, ngakho-ke leyo yimali eyengeziwe ehlala ephaketheni lakho!
Khumbula ukuthi le nja ifanele isimo sezulu esifudumele. Uma uhlala esifundeni esibandayo, akufanele ugcine ama-American Bully akho ngaphandle unomphela.
I-American Bully Bite Force
Abanye abantu bayangabaza i-American Bully ngezizathu ezimbalwa. Ekuqaleni yayizalwe ePit Bull, inokubukeka okwesabisayo futhi isetshenziswa kaningi njengenja yokugada.
Kungaba nzima ukukhipha amehlo akho emihlathini emikhulu ye-American Bully. Kepha, ingabe yizimbopho zensimbi okufanele zesatshwe?
Angikwazanga ukuthola ukulinganiselwa okucacile kwalolu hlobo lwamandla okuluma i-PSI. Kepha, singabheka i- Pit pit futhi I-American Bulldog ukuthola ukuqonda okungcono.
I-Pit Bull ine- I-PSI yama-235 . Lokhu kungamandla okuluma okumaphakathi ngokuqhathaniswa nezinye izinhlobo zezinja. Noma kunjalo, kungcono kakhulu idumela eliyingozi nezimpande ekulweni kwezinja ezenza iPit Bull ilume isatshwe kakhulu.
Amandla e-American Bulldog bite 305 PSI , efaka isibhakela esiningi kune-Pit Bull. Lolu hlobo aluthathwa njengolunolaka, lwabelana ngedumela ne-American Bully ngokuba yinja yomndeni emnene.
Lezi zombili ziyizinhlobo zeBully, ngakho-ke singaqoqa ukuthi amandla e-American Bully bite angahle abe maphakathi nendawo Uhla lwama-200 no-300 lwe-PSI.
Noma yiluphi uhlobo lwenja lungaluma kanzima, kepha kuya nge umnikazi kanye ne- inani lokuxhumana nabantu inja ikutholile okunquma ukusebenza kwayo. Ngakho-ke, lokhu akuwona amandla okuluma okufanele wesatshwe!
Uma ufuna inja ehambisana nayo, i-American Bully iyisinqumo esihle kakhulu. Ngemuva kwakho konke, le nja yazalelwa ikakhulukazi isikhundla.
Ngokwenqubo yokuzala, lokhu kuyi- ngokuzethemba futhi Komphakathi inja. Ngeke kudingeke ukhathazeke ngokuziphatha okungalindelekile noma okweqisayo.
I-American Bully ayingabazi noma iyaxwaya. Esikhundleni salokho, uzokwenyuka ahlangabeze abangane bakho, ngokushesha abe yingxenye yezisebenzi.
Yiziphi ezinye zezici ezisetshenziselwa ukuchaza ubuntu balolu hlobo? Uthembekile, unothando futhi mnene phezulu ohlwini.
I-American Bully ikhona uhlakaniphe kakhulu , ukulinda nokubuka ngaphambi kokuhamba. Uyakuthanda ukujabulisa, ngakho-ke ungalindela ukuthi afunde ngokushesha futhi aphendule ngokungantengantengi ukulalela.
Lokhu yi unamandla kakhulu pup, ngakho-ke khumbula ukuthi uma engatholi iseshini yakhe yansuku zonke yokushisa ikhalori, angayikhipha ezicathulweni zakho noma ifenisha.
Ngabe lolu hlobo lwenza kahle ngezingane?
I-Pit Bull ibizwa ngokuthi 'yi Inja Yezingane ”Kuwo wonke umlando, ngakho-ke akumangazi ukuthi i-American Bully yaziwa njengongcwele eduze kwabancane.
Akunabudlova, akukho ukwelusa, futhi akukho bumping! Uma inja yakho uhlangana kahle , uzodonswa ekuziphatheni okungenakekelwa kwezingane. Ukukhwabanisa kulungile, ngeke asabele. Esikhundleni salokho, i-American Bully izovumela izingane zikhuphukele kuye!
Akunandaba ukuthi unaluphi uhlobo lohlanga onalo, kunconywa ungalokothi ushiye inja yodwa nengane encane.
Ngabe isebenza kahle nezinye izilwane ezifuywayo?
I-American Bully ngokwemvelo iyinja yenhlalo. Uyakuthanda ukuba seduze kwabanye, kufaka nezilwane ezifuywayo. Njenganoma yiluphi uhlobo, ukuzihlanganisa nabantu kusukela ebusheni kuyisihluthulelo sokuqinisekisa ukuthi injana izoba njalo ukhululekile ezimeni ezintsha .
Sizokhuluma kabanzi ngokuzijabulisa ngemuva kwesikhashana, kepha ngokujwayelekile, i-American Bully yenzela i-pal enhle ekhaya nezinye izilwane ezifuywayo noma epaki yezinja.
Ingabe I-American Bully Aggressive?
Masime futhi sixoxe ngokuhlukunyezwa kwezinja. Ngezinhlobo zeBully, ikakhulukazi inja enezimpande zePit Bull, imibono eyeqisayo nemibono eyiphutha sekuyinto ejwayelekile.
Akungabazeki, lezi zinja zinolaka, zishesha futhi zinemisipha. Benza kahle emidlalweni futhi bangabhekana nanoma iyiphi inselelo ngokomzimba nge-finesse.
Zibukeka zilukhuni, zinemisipha exokozelayo kanye nemihlathi emikhulu.
Inkinga ilele ku ukulwa nezinja . Iziqhwaga (ikakhulukazi ama-Pit Bulls) zisetshenziswa kakhulu kule midlalo yegazi esabekayo. Izinja zikhuliswa ngokukhethekile ekuhlukunyezweni, kuphazamisa izici zemvelo zokuthembeka nobumnene.
Lezi zinja zikhona hhayi izinga lokuzala. Bahlukunyezwa ngabantu, okuholela ekuhlukumezeni okuholela ezindabeni zokuziphatha.
Yingakho kubaluleke kakhulu ukuthi unake lapho ukukhetha umfuyi, ukuqinisekisa ukuthi uthenga umdlwane oqale impilo endaweni enothando.
Ngakho-ke, CHA i-American Bully ikhona hhayi ulaka ngokwemvelo . Konke kuncike kofuzo, ukuzalanisa, kanye nokuqeqeshwa (okungukuthi, okungaba yinoma iluphi uhlobo lwenja).
Ukuthi uthatha isinqumo sokuchachamba kumqeqeshi wezinja oqeqeshiwe noma uyafuna zenzele ngokwakho, ukuqeqeshwa kunconywa nakanjani i-American Bully.
Le yinja efuna umsebenzi futhi izolalela ngangokunokwenzeka ukuze ijabulise umnikazi wayo othandekayo.
Njengomnikazi, kubalulekile ukuthi ube njalo ngiyazethemba, ngiyabekezela futhi ngiqinile , akaze akhombise ukukhungatheka. Lokhu akusizi nje kuphela fundisa inja ukuthi ngubani umphathi , kepha kukhuthaza imvelo yenhlonipho nokulandela imithetho.
Izindlela ezi-3 ezinhle kakhulu zokuqeqesha zohlobo lwe-American Bully
Imidlwane yaseMelika Bully ayinakho ukulawula kwesinye kuze kube Izinyanga ezintathu ubudala . Ukuqeqeshwa kwekreyithi kufanele isetshenziswe ngokushesha nje lapho uletha ingane yakho ekhaya.
Ukuchitha isikhathi esincane ekhreyithini kuyasiza ekwakheni inqubo ejwayelekile. Futhi, izinja ngokwemvelo angifuni ukuzikhulula lapho belele khona.
Ikhreyithi iba “umhume” ojwayelekile, lapho inja yakho ingazizwa ikhululekile futhi iphephile.
Ukulalela kuyisici lolu hlobo lohlobo olwaziwa ngalo. Abahlukumezi baseMelika bavela ku- inja esebenzayo ingemuva futhi uzofunda ukulandela imiyalo ngokushesha. Yingakho benza kahle emibonisweni futhi benza kahle izinja zonogada / zensizakalo.
Ngokuthuthukisa ukulalela kusenesikhathi, uzoklonyeliswa ngenja ethembekile, eziphethe kahle eqondayo nguwe ophethe.
Ungaqasha umqeqeshi oqeqeshiwe, kepha uma uzenzela wena, qiniseka ukunamathela kuhlelo. Ukungaguquguquki kubalulekile kulolu hlobo lokuqeqeshwa. Uzodinga futhi hlisa umoya , ungalokothi umeme noma unikeze ukukhungatheka.
Le yindlela ebaluleke kakhulu yokuqeqesha i-American Bully. Muhle ngezingane kepha angaba njalo ame nezinye izinja ngaphandle kokuthi uhlangane kahle kusukela ebuncaneni.
Ungamethula kwezinye izinja ngokumletha epaki yezinja ngezimpelasonto. Mgcine ebambelele futhi umvumele kancane kancane asondele kubangani abanoboya ukuze bahlangane. Maduze, ukuthambekela kwakhe kwemvelo kokuphuma kuzothatha izintambo futhi uzobe eshwiba umsila wakhe ukuhlangabezana nawo wonke umuntu.
Uma kukhulunywa ngempilo, i-American Bully yenza kahle impela. It has a isilinganiso sempilo ye- Iminyaka engu-8 kuya kwengu-12.
Nganoma yikuphi ukuzala kwezinja, kukhona izifo zofuzo ezivamile futhi kufanele zibhekwe. Okufanayo kuya nge-American Bully. Indlela engcono yokugwema lezi zifo ukuthi uqaphele lapho ukhetha umfuyi. Ngizoshaya ngalokhu ngokuhamba kwesikhathi!
Nalu uhlu lwezinkinga ezijwayeleke kakhulu zezempilo zaseMelika.
I-Hip Dysplasia: I-hip dysplasia ukukhubazeka okukhathazayo ngoba ngeke kutholakale kuze kube yilapho inja isikhulile. Ukukhula okungajwayelekile kwejoyini le-hip kuholela ekukhubazekeni okubuhlungu okugcina kubangele ukulahleka kokuhamba noma ukukhubazeka.
Ulwanga oluhlanzekile / udebe: Yethula lapho uzalwa, lokhu kungukungalungi komlomo ophezulu noma umlomo. Akusongeli impilo, kepha kuyisimonyo kuphela. Ukuhlinzwa okulula konke okudingekayo ukulungisa lesi simo.
I-patella ebizayo: Lokhu ukukhula okungajwayelekile okwenza ukuthi idolo lenja lisuswe.
Ukwehluleka kwenhliziyo okuzelwe: Lesi yisimo esiyingozi lapho inhliziyo ikhuliswa khona. Lokhu kuholela ekutheni kukhishwe uketshezi emzimbeni wonke.
Demodectic eziningi: Lesi yisinambuzane esidala ukulahleka kwezinwele noqweqwe esikhunjeni.
Ichthyosis: Le nkinga yesikhumba ebangela ukuqina nokuxebuka kwamaphakethe wepaw.
Okuphezulu: Lokhu ukungezwani kwesikhumba okuvamile okuthinta izinja futhi kubangele ukungakhululeki.
I-cerebrar abiotrophy: Ngenhlanhla, lesi simo singatholakala ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokuzalwa komdlwane. Lesi sifo sofuzo sithinta ubuchopho kanye nesistimu yezinzwa.
I-Retritis Atrophy eqhubekayo: Lokhu isifo samehlo kubangela ukwehla kancane kancane kwamehlo. Okungalapheki, kungaholela ekungaboni.
I-Hypothyroidism: Ngenxa yenkinga ye-thyroid, umsebenzi uyehla futhi ukuzuza kwesisindo kuyasondela.
I-cataract: Lesi ngesinye isifo samehlo esidala ukuthi inja ilahlekelwe ukubona kancane. Ingalungiswa ngokuhlinzwa.
Isikhathi se-American Bully chow
Kunconywa ukondla i-American Bully yakho Izikhathi ezintathu ngosuku.
Ukondla i-American Bully kuthatha ukucatshangelwa okukhethekile ngoba lolu hlobo lunenkinga ukukhuluphala, ukungezwani kwesikhumba , futhi gassiness . Ngokunamathela ekudleni okunempilo okunempilo, lezi zinkinga zingagwenywa.
Ungakhetha ukudla okuluhlaza, okubandakanya imifino ephilayo, izithelo, inyama yenyama, inhlanzi, ingulube, ikalikuni namaqanda. Lokhu kudla kugcwele ukudla okunomsoco futhi akukho neyodwa yezivimbelakuvunda, izithasiselo, kanye nokugcwaliswa okutholakala ku-dog kibble yendabuko.
Ukugcina ukudla okuluhlaza kungadla isikhathi futhi kubize abanye. Esikhundleni salokho, khetha i- i-premium, ukudla kwezinja okujwayelekile nge-American Bully yakho. Qiniseka ukuthi igcwele amaprotheni nama-carbs amakhulu (hhayi ummbila).
Ungumlutha wokuzivocavoca umzimba
I-American Bully ingumuntu onamandla olangazelela isikhathi sokudlala. Uzodinga ukuzivocavoca okungenani i ihora nsuku zonke, o r else uzoziphindiselela ngokonakalisa endlini.
Nayi eminye imibono yokugcina i-American Bully yakho ihamba futhi ayikaze ibe nesithukuthezi.
Ukuhamba ngezinyawo: Lokhu kuhlala kuyindlela enhle! Thatha inja yakho uhambe ibanga elide, elisheshayo epaki noma ngisho nokuhamba izintaba emvelweni.
Ukubhukuda: Lokhu kuhle kakhulu uma uhlala endaweni eshisayo. Ukubhukuda kuhle kakhulu ezinjeni futhi kukhanyise amalunga. Phonsa ibhola echibini bese ubuka i-American Bully yakho iqhuma.
Ukuqeqeshwa kwe-Agility : Lokhu akuphikisi inja yakho kuphela ngokomzimba, kepha nangokwengqondo. Ngenkambo yokuqeqeshwa kwe-agility, uthola ukucija ukulalela.
Ukugibela ibhayisikili: Qala ukuprakthiza ngokuhamba kancane ngenkathi inja yakho idonsa eceleni kwebhayisikili lakho. Maduze nje nobabili nizodabula imigwaqo.
Amathoyizi namapuzzle: Tshala imali kumathoyizi okuhlafuna umsebenzi onzima ukuze unikeze i-American Bully yakho okuthile okuzokuluma ngosuku lwemvula ngaphandle kwezicathulo zakho. Ama-puzzle wezinja ashukumisa ubuchopho, nokuyinto ethokozelwa yilolu hlobo.
Uma ukuba ne-American Bully kungaphezulu kohlu lwakho lwezinto okufanele zenziwe, ake singene kwesinye sezingxenye ezibaluleke kakhulu zalo mhlahlandlela: ukuthola abalimi.
Okokuqala, lungela ukukhipha inhlama enkulu. Ibanga lentengo le-American Bully liphakathi $ 2000 no- $ 5000 . Lena inja ethandwayo!
Ungacabanga ukuthi ukuthola umfuyi wezinja kulula njengosesho lweGoogle. Empeleni, kunamafulegi amaningi abomvu okufanele uwanakekele lapho ukhetha umfuyi.
Uzofuna ukuzifundisa ukuthi ungazulazula kanjani indlela yakho kuzo zonke izigayo ze-puppy ukuze uhlale kumnqobi.
Ungazigwema kanjani izigayo zemidlwane?
Yenza i-aphoyintimenti yokuvakashela umfuyi . Izigayo zePuppy azifuni ukuthi ubone izimo ezingenabuntu lapho zikhipha imidlwane njengefektri.
Umfuyi oziphethe kahle uzokumemela ohambweni, ejabule ukukukhombisa. Uzobona ukuthi imidlwane idlala ngaphandle uma ivezwa ezinye izilwane nabantu futhi uzothola ukuhlangana nabazali.
Yiya kumdlwane obiza okungaphezulu. Ukhokhela ikhwalithi, amagazi amsulwa neziqinisekiso zezempilo.
Cela imvume yezempilo. Umfuyi ohlonishwayo uzohlola imidlwane kudokotela wezilwane bese ekhishwa izifo ezithinta ufuzo, njenge-hip dysplasia.
Hlangana futhi ubingelele nabazali . Lokhu kuzokutshela izinqwaba ngemvelaphi yezokwelapha nezinye izici zofuzo.
Cela ubufakazi. Ukufunda ngokuhlangenwe nakho kwamakhasimende okwedlule kukunikeza isithombe sangempela.
Cwaninga ngohlobo kuqala. Uma kukhulunywa ngabahlukumezi baseMelika, abanye abalimi abangenasimilo bazopompa izinja ngama-steroids ukuze zenze zibonakale zinemisipha ethe xaxa. Lokhu akuyona nje kuphela ingozi empilweni yabo, kepha ngemuva kwesikhashana, ama-steroids ayaguga ukuveza inja encane ongavumelananga nayo.
Konke mayelana nokubuza imibuzo! Kufanele ukulungele ukubuza imibuzo yomfuyi futhi okuphambene nalokho.
Umfuyi onothando uyayithanda imidlwane yakhe futhi uzofuna ukuqinisekisa ukuthi uya kumnikazi ophethe. Bazofuna nokuxhumana nabo ezinyangeni ezimbalwa zokuqala ngemuva kokuthi umdlwane uye ekhaya nawe.
Sikubeke ngalaba bafuyi abahloniphekile baseMelika ukuze uhlole.
Abahlukumeza iRazor’sEdge : IYAHAMBA
Abahlukumezi bakaDeveli : SEBENZISA
Iziqhwaga Zosayizi WaseTexas: I-FL
I-American Bully iyatakula nezindawo zokukhosela
Leyo thegi entsha yenani lomdlwane kungenzeka ingatholakali kuwe. Ayikho inkinga! Ungathola abahlukumezi abahle baseMelika lapho usindisa.
Lezi zinja ezimnandi zilinde ukuya ekhaya lazo laphakade futhi zikugeze ngothando. Nayi eyethu uhlu lwama-American Bully asindisayo nezindawo zokukhosela. Zibonisa izinhlobo ezahlukahlukene ze-Bully, kepha ungabheka futhi i-American Bully.
Ukutakulwa Okumangazayo Komusa : FL
Abasebenzi baseNew York Bully Crew : OKUSHA
ENingizimu Of The Bully Rescue : SC
Izinhlobo eziyiziqhwaga zihlanganyela into eyodwa ngokufanayo: Zisuka endulo UMolosser izinja, njenge UCanis Panther, noma i- I-American Bandogge , okuyingxube yezinhlobo ezahlukahlukene zeMolosser.
Imvamisa kuvezwa njenge nolaka , lezi zinhlobo zivame ukuthwala umthwalo wokuba yingozi. Ngenxa yaleli dumela, izinja ezithile, njengePit Bull, zikhona kuvinjelwe kwezinye izifundazwe.
Iqiniso ukuthi, izinhlobo zeBully azinalo ulaka ngokwemvelo. Yize bengabukeka besabisa ngokwakhiwa kwemisipha, empeleni bayizinja ezihambisana nenhliziyo. Yindlela abantu abaphatha futhi baphakamise ngayo izilwane ezifuywayo ze-canine ezinquma ukusebenza.
Mhlawumbe i-American Bully akuyona eyakho. Kulungile, kunezinye izinhlobo eziningi ezimangalisayo ze-Bully.
Nalu uhlu lwezinja ezabelana ngokufana.
I-American Staffordshire Terrier
UDogue De Bordeaux
I-Terrier encane yeBull
I-Olde English Bulldogge
I-Staffordshire Bull Terrier
Ungase futhi ufune ukubheka i- I-Bulldog yesiNgisi encane .
I-American Bully vs. Pit Bull: uyini umehluko?
Ekuboneni kokuqala, ungazibuza ukuthi yini eyenza lezi zinhlobo ezimbili zihluke kangaka. Eqinisweni, kunokwehluka okuningana okubalulekile.
Isici esikhulu esihlukanisayo ukubukeka komzimba . I-American Bully inekhanda elikhulu elinempumulo ebukekayo uma iqhathaniswa nobuso obuncane be- Pit pit .
I-American Bully ikhona mfushane kune-Pit Bull, ikakhulu ngenxa yemilenze yayo. Uhlobo lwe-Classic kuphela lwe-American Bully olwaziwa ukuthi lunemilenze elingene ngokwesilinganiso.
Uma kukhulunywa ngokwakhiwa, iPit Bull iyaziwa impela ngemisipha yayo kanye nokulwa kwayo, kepha imisipha ingesinye sezici eziyinhloko i-American Bully eyazalelwa ukubukisa ngayo. Amathambo asindayo, isifuba esibanzi nezinto eziwugqinsi zikwenza kube i-canine enamandla.
Ngabe i-American Bully ne-American Bulldog ziyafana?
Impendulo emfushane ithi Cha , azona izinhlobo ezifanayo.
I- I-American Bulldog yisithonjana samasiko, njengoba kade sahlala isikhathi eside kakhulu kune-American Bully. Ekuqaleni yayizalwe kusukela ekungabikho manje I-Old English Bulldog , zilethwe e-US ngabokufika.
I-American Bulldog yazalelwa yona umsebenzi wasepulazini , kanye nemibukiso yezinja nemidlalo. I-American Bully, ngakolunye uhlangothi, iyigatsha lePit Bull, elenzelwe ubungane.
Ungazihlukanisa lezi zinhlobo ezimbili ngokwehlukana kwazo ukubukeka komzimba . I-American Bulldog yinde, inemilenze emide nomzimba ohleleke kakhudlwana, okhanyayo. Ikhanda lide kunelo le-American Bully.
Yakhiwe njengesilo, i-American Bully iyi-mayhem muscle! Ungazizwa wesatshiswa yileso sifuba esibanzi, esikhulu kanye neqoqo elikhulu lomhlathi. Le nja inothando oluningi kakhulu engingalunikeza.
Masenze impindelo esheshayo ngalolu hlobo, futhi unganquma ukuthi kuyafana yini.
Banzi futhi ubungane
Iziqhwaga 'Zizinja ZamaNanny', ngakho-ke yenza kahle ngezingane
Ihlakaniphe kakhulu futhi kulula ukuyiqeqesha
Ukuzilungisa okuphansi ( HHAYI hypoallergenic )
Ifanele amafulethi nezindlu ngenxa yezinhlobo eziningi zosayizi
I-excels emibonisweni, imincintiswano futhi njengenja yensizakalo
Uzodinga ukunikela isikhathi esanele ekuqeqesheni, ikakhulukazi umphakathi . Lokhu kuyadingeka ukukhuthaza ukuzethemba kwezinye izinja nabantu.
Ukukhuluphala ngokweqile, i-gassiness, kanye ne-allergies yesikhumba kuvamile, ngakho-ke okunempilo (kwesinye isikhathi kubiza kakhulu) ukudla kuyadingeka.
Amandla aphezulu asho ukuzivocavoca nsuku zonke Kumele uvikele ukuziphatha okulimazayo.
Ucabangani nge-American Bully? Sitshele kumazwana abekiwe!
8 Imibuzo Iyaphendulwa nge-German Shepherd Lab Mix
I-bulldog yesiNgisi ehlala incane
siyini isikhathi se-teacup chihuahua
i-yellow lab pit bull mix
yini inja ye-shorkie
dachshund omnyama nomhlophe onezinwele ezinde